သီးသန့်မူဝါဒ | ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
လူ့အဖွဲ့အစည်းအားအသုံး၀င်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများပေးရန်နှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုသေချာစေရန်, ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်မှာသဘာဝဖြစ်သည်။ အထက်ပါနားလည်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်းအတွက်မူဝါဒများအားအောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီး၎င်းမူဝါဒများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ လိုက်နာရန်ဖော်ပြထားသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရာတွင် ကူဘိုတာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အသုံးပြုမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအတိအကျဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သည်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသုံးစွဲသူ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲ (သို့) ဥပဒေ(သို့)စည်းမျဉ်းများကခွင့်ပြုချက်မရှိလျှင် အသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်၍ သုံးစွဲသူနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသုံးစွဲခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူသောအခါ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သည်အသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုလူသိရှင်ကြားကြေငြာသည်။ ဝယ်ယူပြီးနောက်ချက်ချင်းအသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသိပေးခြင်းသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားကြေငြာခြင်း များပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်စာရွက်စာတမ်းများတွင် (အီလက်ထရောနစ်ဒေတာနှင့်သံလိုက်အချက်အလက်များအပါအ ၀ င်) ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝယ်ယူသူထံမှတိုက်ရိုက်ရရှိသည့်အခါ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သည်အသုံးပြုရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြိုတင်ဖော်ပြသည်။ဥပ‌ဒေ သို့ စည်းမျဥ်းအရ ခွင့်ပြုချက်မရှိပါက အချက်အလက်များအား အသုံးမပြုနိုင်ပေ။
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက်သည် အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှု၊ အချက်အလက်ပျက်စီးခြင်း၊ အတုအယောင်ဖြစ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း (သို့) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အခြားပြproblemsနာများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များအားတားဆီးကာကွယ်ခြင်းများအပါအ၀င်လိုအပ်သောသင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် အကြီးအကဲများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများကို သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်၎င်း၏ ၀န်ထမ်းများ၊ လိုအပ်သောသင့်လျော်သောကြီးကြပ်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။
မူ၀ါဒ ၃ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအတွက် မူ၀ါဒများ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတကွအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ််််််််််််််််််််််ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးသည့်အခါ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက်သည် စာချုပ်များချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း အပါအ၀င်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ လိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သည်ဖောက်သည်များ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိခြင်း(သို့)ဥပဒေများ(သို့)စည်းမျဉ်းများအရခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါက ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မူ၀ါဒ ၄ထုတ်ဖော်မှု၊ မှန်ကန်မှုနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ခြင်း
ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက်သည်‌‌ ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များအားပြန်လည်အသိပေးခြင်း၊ ထုတ်ဖေါ်ခြင်း(သို့)ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီထိန်းသိမ်းထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်၍၊ အသုံးပြုခြင်း(သို့)ရပ်တန့်ခြင်း(သို့)အခြားတောင်းဆိုမှုများကိုရည်ရွယ်ခြင်းအားတုံ့ပြန်သည်။ သင့်တွင်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုချက်ရှိပါကသီးခြားဖော်ပြထားသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။. ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများအရဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုသင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြင့်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။.
မူ၀ါဒ ၅စနစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်တိုးတက်မှု အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဤကြေငြာချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူဘိုတာမြန်မာကုမ္ပဏီ လီမိတက် သည်လိုအပ်သောပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ၀န်ထမ်းများအားဤကြေငြာချက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ၀န်ထမ်းများအားအသိပေးခြင်းအားဆောင်ရွက်သည်။
"ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်" ဆိုသည်မှာသက်ရှိတစ် ဦး ချင်းကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောရှင်သန်သူတစ် ဦး အကြောင်းအချက်အလက်ကိုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူရည်ညွှန်းခြင်းအားဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားခွဲခြားသိမြင်စေနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်သည်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖြစ်သည်။
"ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်" ဆိုသည်မှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချက်အလက်စုဆောင်းမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအီလက်ထရောနစ်ဒေတာဘေ့စ်များ၊ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များသို့မဟုတ်စာအုပ်များကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်စနစ်တကျစီစဉ်ထားသောအစိုးရအဖွဲ့အမိန့်မှသတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်အစုတခုဆိုသည်။
"ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ" ဆိုသည်မှာ Kubota Myanmar Co. , Ltd မှ အစိုးရအဖွဲ့၏အမိန့်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များမှ လွဲ၍ အများပြည်သူနှင့်အခြားအကျိုးစီးပွားများကိုပါထိခိုက်နစ်နာစေသည့်အကြောင်းအရာများကို ထုတ်ဖော်ပြသရန်(သို့)ပြင်ဆင်ရန်အခွင့်အာဏာရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ခြောက်လအတွင်း (၆) လအတွင်းဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
နိုင်ငံအလိုက် မူ၀ါဒအမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်သည်။
ကွတ်ကီးများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ကြည့်ပါ။